i-SA Emerging ihlulwa ngama-runs awu-54 kumdlalo wokuqala wohambo
eSYLHET: Ushwibe kahle u-Jenay Winster kodwa akwanelanga njengoba i-South Africa emerging women iqale uhambo lwayo lwase-Bangladesh ngokuhlulwa ngama-runs awu-54 iqembu lasekhaya kumdlalo wokuqala we-One-Day Internatioanl e-Sylhet ngeSonto.
Lomdlali omncane uthole u-3/33 njengoba i-Bangladesh emerging iqede ku-195/9 kuma-overs abo awu-50, izivakashi zaphendula ngo-141 ziphume zonke kuma-overs awu-44.5 e-Sylhet International Cricket Stadium.
Ama-South Africans, aqeqeshwa u-Dinesha Devnarain, angemuva ngo-1-0 kwi-series enemidlalo emihlanu futhi izobe ithemba ukwenza kahle kumdlalo wesibili ngoLwesibili.
Kumdlalo wabo wokuqala, banqoba i-toss futhi bakhetha ukushaya kuqala, kodwa bahlulekile ukukhipha abashaya phezulu.
u-Murshida Khatun (36) no-Sharmin Sultana (34) bawaqalisa kahle ama-Bangladeshi ngaphambi kokuthi u-Farhana Hague amise kahle i-innings ngokushaya u-71 emabholeni awu-102 (5 fours) engakhishwanga.
Ama-South Africans akwaze ukunciphisa umphumela emuva kokuthi abavulayo u-Khatun-Sultana benze inhlanganiso ka-78, nokho u-Hague ukukhuphula iqembu lakhe kumphumela oncintisanayo.
Bakhiphe inti eyodwa umuntu emunye, u-Jade de Figuerido (1/33), u-Leah Jones (1/23), u-Micheala Andrews (1/22) no-Faye Tunnicliffe (1/18).
Iqembu le-SA Emerging liqale kahle, othole ama-runs amaningi u-Andrie Steyn (41) no-Robyn Searle (15) benze inhlanganiso yama-runs awu-41 bevula umdlalo.
Kodwa izinto zibhedile njengoba bavithikile balahlekelwa izinti zabo zonke ngama-runs awu-100. Olandelile oshaye ama-runs amaningi kube u-Khayakazi Mathe (17*) njengoba u-Salma Khatun ethole u-3/25 – izivakashi zikhishwa zonke kusele ama-overs awu-5.1.
i-CSA ihalalisele ama-Proteas ngokunqoba ikhilikithi yebhola elimhlophe u-Lee no-Wolvaardt banqobele ama-Momentum Proteas i-T20 series okokuqala bedlala ne-India Ukukhazimula kuka-Bosch kunqobela ama-Momentum Proteas i-T20 yokuqala Uyaziqhenya u-Moreeng njengoba ama-Momentum Proteas aba iqembu lesibili emhlabeni u-De Klerk, u-Du Preez no-Bosch banqoba i-series ngo-4-1 i-CSA imemezela amaqembu ama-Proteas anezinkontileka ku-2021/2022 i-CSA ihalalisela ama-Momentum Proteas ngokunqoba i-ODI series e-India u-Goodall uhlanganise umjaho oyirekhodi njengoba i-SA ithuse i-India ukuqoba i-series u-Lee okhaliphile usize ama-Momentum Proteas abe ngaphambili ngo-2-1 Ama-Proteas ka-Moreeng afunde kokuhlangenwe nakho okwedlule Uhambo lapho kungaziwa khona: u-Sune Luus